MN HLALA! Ikhaya le-4bed: Hamba uye eWest End - I-Airbnb
MN HLALA! Ikhaya le-4bed: Hamba uye eWest End
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Jesse
Wamukelekile ekhaya! Lena i-AirBnB yethu yesi-9 futhi sithemba ukuthi ukhethe ukuhlala nathi! Lesi sakhiwo esilungisiwe sithatha isinyathelo esivela eWest End ShoppingE Entertainment Center! Hamba uye kumathani Ezindawo zokudlela, Ezokuthenga noma kumamuvi, ukufinyelela okumangalisayo kwe-HWY 394 & 100 ukuya edolobheni laseMinneapolis, emachibini aphezulu, noma uphumele endaweni yeLake Minnetonka.
Ifaka i-1600sq ft, umqondo ovulekile kusuka ekhishini / indawo yokuhlala / yokudlela, ukulungiswa kabusha kuka-2016 kuya ekhishini okugeza, igumbi lokuhlala elengeziwe Lezinga eliphansi, elikhulu elibiyelwe egcekeni elingemuva nokunye okuningi!
Izici zekhaya lami;
-Open Concept kusuka ekhishini / yokudlela / yokuhlala ilungele ukuzijabulisa
-Ngaphezu kwe-1600sq ft eqediwe
-Ukulungiswa kwekhishi kuqedwe ngo-2016
-Ukulungiswa kwegumbi lokugezela kuqedwe ngo-2016
-Amagumbi okulala angu-4 ane-Queen-Queen-Full-Full-Full
-Igumbi lokuwasha elisezingeni eliphansi
-Central Air / Ukushisa Ngempoqo
-2 Igalaji lezimoto w / isikhala sezinye ezi-2 ku-driveway
-Ukhaphethi ongaphansi usanda kufakwa esikhundleni-Omusha!
-Cishe i-quarter acre ebiyelwe ngokuphelele egcekeni/emuva
I-St Louis Park yinhle kakhulu! Kuyindawo enakekelwa kahle imizuzu yomakhelwane ukusuka edolobheni le-MPLS. Kuthuthuke eminyakeni engu-2-3 eyedlule njengoba izithuthi zomphakathi eziya edolobheni ziba ngcono ngakho izindawo zokudlela eziningi, ukuthenga, amabhizinisi masha futhi kumnandi ukuwahlola! Indawo ephephile kakhulu (ngisahlala endaweni ngakho-ke ngiyayithanda lapha!)
Ezinye izindawo ezinhle zokuthenga
-Uma unezingane, iBlackstone Park iqhele ngamabhulokhi ama-2
-I-West End Shopping inezindawo zokudlela eziningi njengoba ngike ngasho ngaphambili futhi zonke ziyakwazi ukuhamba kahle... I-Yard House, i-Rojo ne-Punch Bowl Social yizintandokazi zami!
-Uma ufuna ukubona ingxenye yendawo ejabulisayo, qasha Amabhayisikili e-Nice-Ride futhi ugibele uzungeze iLake Calhoun, Harriet & Isles. Lawa machibi akhona edolobheni kanye nezinto eziningi okumelwe zenziwe eduze kwawo wonke. Cishe imizuzu engu-5-10 yokushayela!
I am a realtor, interior designer and a fitness professional in MPlS! I am biased but I LOVE my city and I hope you enjoy coming here and seeing what it’s all about :)
Ngihlala kwamakhelwane ngijabule kakhulu ukusiza noma lapho kudingeka! Nginikeza inombolo yami yocingo futhi izivakashi zamukelekile ukuthi zishayele noma zithumele imiyalezo uma kukhona okudingayo!